August 2020 - MM Daily Life
ညဘက်အိပ်နေတုန်း မကြာခဏ နိုးနေတာဟာ မသိစိတ်မှာ ဒီလိုအခက်အခဲတွေ ဖြစ်နေလို့ပါ…
August 31, 2020 by MM Daily Life
ညဘက်အိပ်နေတုန်း မကြာခဏ နိုးနေတာဟာ မသိစိတ်မှာ ဒီလိုအခက်အခဲတွေ ဖြစ်နေလို့ပါ… ယေဘုယျအားဖြင့် နေ့ခင်းအချိန်မှာ အလုပ်လုပ်ကြပြီး နောက်တစ်နေ့အတွက် အားပြန်မွေးတဲ့အနေနဲ့ ညဘက်မှာ အနားယူ အိပ်စက်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သင်ကတော့ ညဘက်တွေမှာ လွယ်လွယ်နဲ့ အိပ်မပျော်ဘူး။ အိပ်ပျော်သွားပြီးရင်လည်း မကြာခဏ နိုးလာတတ်တယ်ဆိုရင် ဘယ်အချိန်တွေမှာ နိုးလာတာလဲဆိုတာကိုကြည့်ပြီး သင့်မှာဖြစ်နေတဲ့ အခက်အခဲနဲ့ ပြဿနာတွေကို ဖော်ထုတ်လို့ရပါတယ်။ ဖတ်ကြည့်ပြီး အဖြေရှာလိုက် ပါအုံးနော် …။ (၁) ည ၁၁ နာရီအထိ အိပ်မပျော်ဘူးဆိုရင်” ပုံမှန်အိပ်ချိန်ရှိတဲ့သူတစ်ယောက်က ၁၁ နာရီဆို အိပ်ပါပြီ။ ဒီအချိန်အထိ မအိပ်ပျော်ဘူးဆိုရင်တော့ စိတ်ဖိစီးမှုနဲ့ တွေးပူစရာလေးတွေ အနည်းငယ်ရှိနေတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ အသက်ရှူလေ့ကျင့်ခန်းကို ၁၅ မိနစ်လောက် လုပ်ပေးလိုက်ရင် အိပ်ပျော်နိုင်ပါတယ် …။ (၂) ၁၁နာရီ ကနေ … Read more
ရှောင်သင့်တဲ့ ယောက်ျားအမျိုးအစား(၇)မျိုး ဘယ်လောက်ပဲ လန်းနေနေ၊မိုက်နေနေ လုံးဝမပတ်သင့်တဲ့ ယောက်ျားတွေရှိ ပါတယ်။ကိုယ့်အနားမှာ ဒီလိုလူမျိုးက မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအဖြစ်ရှိနေရင် မိတ်ဆွေဆက်ဆံရေးအတိုင်းပဲ ထားပါ။ လုံးဝကို ကိုယ့်ဘ၀ထဲ၊ကိုယ့်နှလုံးသားထဲ အ၀င်မခံပါနဲ့။တတ်နိုင်ရင်တော့ အနေနီးပြီး စိတ်ယိမ်းယိုင်တာမျိုး မဖြစ်ရအောင် ရှောင်ပါ။လုံးဝရှောင်သင့်တဲ့ ယောက်ျား အမျိုးအစားတွေကတော့… (၁)ချစ်သူရှိသူ ဘယ်လောက်ပဲ လန်းနေနေ၊တော်နေနေ လုံးဝရှောင်သင့်တဲ့ ယောက်ျားအ မျိုး အစား ထဲမှာ ဒီလိုလူမျိုးပါပါတယ်။ချစ်သူရှိနှင့်နေပြီးဖြစ်တဲ့ ယောက်ျားမျိုးဆိုရင် ဘယ်လောက်ပဲ စိတ်ထဲက သဘောကျမိနေနေ လုံးဝရှေ့မတိုးပဲ ရှောင်ပါ။ (၂)အလုပ်မရှိတဲ့သူ ဒီလိုလူမျိုးကလည်း ရှောင်သင့်တဲ့ အထဲမှာ ပါပါတယ်။ကျောင်းပြီးခါစ အလုပ် ရှာဖွေနေတဲ့ သူမျိုးတွေကို ဆိုလိုချင်တာမဟုတ်ပါဘူး။ကျောင်းပြီးတာ တော်ေ တ်ာကြာတဲ့ အထိ ဘာအလုပ်ကိုမှ မယ်မယ်ရရ မလုပ်ပဲ အိမ်က မိဘ လုပ် စာကို ထိုင်စားနေတဲ့သူမျိုးကို … Read more
ပြည်သူများ မပေါ့ဆကြပါနဲ့ လူနာသစ် ၉၅ ဦးတဲ့
ပြည်သူများ မပေါ့ဆကြပါနဲ့ လူနာသစ် ၉၅ ဦးတဲ့ ကိုဗစ် ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (၃၁-၈-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ည (၈:၀၀) နာရီ ၁။ (၃၁-၈-၂၀၂၀) ရက်နေ့အတွက် ကိုဗစ် ရောဂါ ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးရာတွင် – – အမျိုးသားကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန (ရန်ကုန်) (NHL) မှ (ပထမအသုတ်) ဓာတ်ခွဲ နမူနာ (၉၃၂) ခု၊ – ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန (DMR)မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၂၁၈) ခု၊ – ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန (မန္တလေး) မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၆၄) ခု၊ – ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန (မော်လမြိုင်) မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၂၅၆) ခု၊ – ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ စစ်တွေမြို့မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၁၂၃) … Read more
ဒီလိုမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို တွဲနေတယ်ဆိုရင် အခုချက်ခြင်း လမ်းခွဲလိုက်ပါ…
August 31, 2020 August 31, 2020 by MM Daily Life
ဒီလိုမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို တွဲနေတယ်ဆိုရင် အခုချက်ခြင်း လမ်းခွဲလိုက်ပါ… ဒီလိုမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို တွဲနေတယ်ဆိုရင် အခုချက်ခြင်း လမ်းခွဲလိုက်ပါ ……။ သူမကို တကယ်မချစ်ဘူးလား … ထားခဲ့လိုက်ပါ …။ သူမကို သတို့သမီးဝတ်စုံနဲ့ သင့်ဘေးမှာရပ်ဖို့အထိ မရည်ရွယ်ထားဘူးဆိုရင် သူမကို လက်တွဲဖြုတ်ခဲ့ လိုက်ပါ …။ သင့်ကလေးတွေရဲ့ မိခင်နေရာအထိ သူမကို ပုံဖော်မထားဘူးဆိုရင် သူမကို ချန်ထား ရစ်ခဲ့ပါ …။ သူမရဲ့ မျက်နှာမသစ်ခင် ကပုံ သူမရဲ့ အရှိပုံစံကို လက်မခံနိုင်ဘူးဆိုရင် သူမနဲ့ လမ်းခွဲလိုက်ပါ …။ သူမရဲ့ရယ်သံတွေက သင့်နှလုံးသားကို မနွေးထွေးစေဘူးဆိုရင် သူမနဲ့ ဝေးရာကို လျှောက်သွားလိုက်ပါ …။ သူမရဲ့အပြုံးတွေက သင့်ကို မပျော်ရွှင်စေဘူးဆိုရင် သူမကို လွှတ်ချ ပစ်လိုက်ပါ …။ သူမရဲ့ ကလေးဆန်မှုတွေကြောင့် … Read more
အဆုတ်ကျန်းမာရေးချွတ်ယွင်းလာပြီဆိုရင် ခန္ဓာကိုယ်မှာပြလာတတ်တဲ့လက္ခဏာရပ်များ… ယနေ့ခေတ်မှာ လူဦးရေထူထပ်ပြီး ယာဉ်တွေ ပေါများလာတာကြောင့် လေကောင်းလေသန့်ရဖို့က ခက်လာပါပြီ။ အဲဒါကြောင့် အဆုတ်ကျန်းမာရေးကို ဂရုစိုက်ဖို့ လိုအပ်လာပါပြီ။ အဆုတ်က နေမကောင်းရင် ခန္ဓါကိုယ်မှာ လက္ခဏာတွေ ပြလာတတ်ပါတယ်နော် …။ ၁။ ကျောနဲ့ပုခုံး နာကျင်လာခြင်း” ရင်ဘတ်အောင့်တာက အဆုတ်ကင်ဆာရဲ့ ရှေးဦးလက္ခဏာဖြစ်တာတောင် ကျောနဲ့ပုခုံးနာကျင်လာခြင်းက တွေ့ရခဲတဲ့ လက္ခဏာပါပဲ။ ကျောနဲ့ပုခုံးနာကျင်တဲ့လက္ခဏာတွေ ပြလာရင် အဆုတ်ကို ကုသလို့ရပါသေးတယ်။ နာကျင်မှုက ပြင်းထန်လာပြီး ကျောက အမြဲလိုလို နာကျင်နေတယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်နဲ့ မြန်မြန်ပြသ သင့်ပါပြီ …။ ၂။ ချောင်းဆိုးခြင်း” အဆုတ်ကျန်းမာရေးမကောင်းရင် ချောင်ူဆိုးလာပါတော့တယ်။ အဲဒီလို ချောင်းဆိုးတာက အအေးမိလို့ ချောင်းဆိုးတာနဲ့ ဆင်ဆင်တူပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ချောင်းဆိုးခြင်းက နာတာရှည်ရောဂါတစ်ခုရဲ့ လက္ခဏာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် … Read more
မိန်းမတစ်ယောက်က ဘယ်လိုအချိန်မျိုးမှာ သူ့လက်တွဲဖော်နဲ့ ညှိမရနှိုင်းမရနဲ့ သဟဇာတမဖြစ်တော့ဆုံးလဲ သိလား…
မိန်းမတစ်ယောက်က ဘယ်လိုအချိန်မျိုးမှာ သူ့လက်တွဲဖော်နဲ့ ညှိမရနှိုင်းမရနဲ့ သဟဇာတမဖြစ်တော့ဆုံးလဲ သိလား… ဥပေက္ခာတွေနဲ့ နေသားကျသွားတဲ့အချိန်ပဲ …။ အချစ်ကို လိုနေချိန်မှာ အချစ်မခံရတဲ့မိန်းမ၊ နွေးထွေးမှုကို တောင့်တနေချိန်မှာ အေးတိအေးစက် ဆက်ဆံခံရတဲ့မိန်းမ၊ ဂရုတစိုက်နဲ့ ကြင်နာတာတွေကို မျှော်လင့်နေချိန်မှာ လျစ်လျူရှု ခံခဲ့ရတဲ့မိန်းမ …၊ အဲ့လိုမိန်းမတွေ အေးစက်သွားတဲ့အခါ ယောက်ျားတွေ မာကျောပါတယ် ဆိုတာထက် ပိုပြီး ကြောက်ဖို့ ကောင်းသွားပါတယ် …။ သူတို့လိုအပ်နေချိန်မှာ သူတို့လိုအပ်ချက်တွေကို မျက်ကွယ်ပြုခံလိုက်ရတဲ့ အတွက် မချစ်တတ် မကြင်နာတတ်တဲ့ဘဝမှာ နေသားကျသွားတဲ့အချိန်က ကြောက်စရာ အကောင်းဆုံးပဲ …။ သူတို့အေးစက်သွားတဲ့အချိန်မှ လာပြီး ကြင်နာပြ ချစ်ပြနေရင် အပိုတွေ လာလုပ်ပြနေတယ် ဘာတွေလဲ စိတ်ရှုပ်လိုက်တာ ဆိုပြီးတော့ကို စိတ်ထဲမှာ ကသိကအောက်တွေ ဖြစ်ကုန်ရော …။ အနားမှာ … Read more
၁၁နှစ်သမီးငယ်လေးကို သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးရင်း လျှော့ခ်ဖြစ်ကာ နေရာမှာပင်သေဆုံး
၁၁နှစ်သမီးငယ်လေးကို သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးရင်း လျှော့ခ်ဖြစ်ကာ နေရာမှာပင်သေဆုံး စိတ်မကောင်းစရာပါ။ ထိုင်းမှာဖြစ်သွားတာပါ …။ ထိုင်းနိုင်ငံ အယုဒ္ဒယခရိုင် မဟာရတ်မြို့ကအသက် (၁၁ ) နှစ်အရွယ်သမီးငယ်လေးကို ကျောင်းမှာ ဆရာဝန်တွေက (Cervical Cancer Vaccine) သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာကာကွယ်ဆေးထိုးလိုက်ပြီး သိပ်မကြားဘူး ကလေးက ” ရင်ဘတ်အောင့်တယ် အောင့်တယ် ” ဆိုပြီး အန်တယ် ၊ သိပ်မကြာပါဘူး ကလေးက သေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ် ။ ပုံမှန်ဘာရောဂါအခံမှလည်းမရှိဘူးလို့ မိဘတွေက ရေးသားထားပါတယ် …။ စာသင်ကျောင်းတွေမှာ ကာကွယ်ဆေးတွေယခုလို လိုက်ပြီးထိုးကြတဲ့အခါ ကလေးမှာ Fever ရှိနေလား ? မရှိဘူးလား ? ဆိုတာ ကနဦး Temperature နဲ့ မစမ်းသပ်မိတာလား တော့မသိပါဘူး ၊ ကလေးဟာ အဖျားအနည်းငယ်ရှိနေတယ်လို့ … Read more
တစ်ပတ်စာ ခုနှစ်ရက်သားသမီး ကံကြမ္မာဟောကိန်း (31-8-2020 မှ 6-9-2020 ထိ)
တစ်ပတ်စာ ခုနှစ်ရက်သားသမီး ကံကြမ္မာဟောကိန်း (31-8-2020 မှ 6-9-2020 ထိ) တနင်္ဂနွေသားသမီး” သင့်အတွက်ကံကြမ္မာကောင်းများစတင်ဝင်ရောက်လာမည့်အချိန်ပါ။ ဤအချိန်တွင်သင် ဘာပဲလုပ်လုပ်အောင်မြင်မူများရရှိနေပါလိမ့်မည် မိဘဘက်မှ ဆွေမျိူးများ ညအိပ်ရောက်ရှိ လာတတ်ပါသည် …။ ဘိုးဘွားပိုင်အမွေအနှစ်များ ရရှိခံစားနိူင်မည့်အခွင့်အရေးများပေါ်ပေါက်လာပါလိမ့်မည် အိမ်ခြံမြေအကျိူးပေးပါလိမ့်မည် ကျန်းမာရေးတွင်ခါးမကြာခဏနာနေလိမ့်မည် ငယ်ရွယ်သူများ ချစ်သူထံမှ လက်ဆောင်ပစ္စည်းရရှိပါလိမ့်မည် …။ ထီ ၁၉ ပါသော ထီထိုးပါ။ ယတြာ – မိမိအိမ်ရှေ့တွင် ငွေပန်းပင်နှစ်ပင်စိုက်၍ ငွေအကြွေစေ့စိမ်ထားသော ရေဖြင့်မကြာ ခဏလောင်းပေးပါ …။ တနင်္လာသားသမီး” ပညာရေးလုပ်ငန်းပွဲစားလုပ်ငန်းများအကျိူး ပေးမည့်အချိန်ကာလပါ။ မိမိရသင့်ရထိုက်သော ငွေကြေးအပြင် အပိုထပ်ဆောင်းဆုကြေးများ ပါရရှိပါလိမ့်မည် ကျန်းမာရေးမကြာ ခဏချူချာနေလိမ့်မည် …။ အထူးသဖြင့်အသေးအမွှားလေးတွေ မကြာခဏ ဖြစ်နေတတ်ပါသည်။ အနက်ရောင်အသုံးအဆောင်များရှောင်ပါ။ အစိမ်းရောင် အသုံးအဆောင်များများများ သုံးစွဲပေးပါ။ ငယ်ရွယ်သူများ အချစ်ရေးတွင် … Read more
“အကြွေးရစရာရှိတဲ့ ကောင်လည်းသတ္တိရှိလို့ သူပိုက်ဆံဆိုရင်ရှေ့ထွက်ခဲ့” ဆိုတဲ့ မင်းခန့်ကျော်
“အကြွေးရစရာရှိတဲ့ ကောင်လည်းသတ္တိရှိလို့ သူပိုက်ဆံဆိုရင်ရှေ့ထွက်ခဲ့” ဆိုတဲ့ မင်းခန့်ကျော် သရုပ်ဆောင်မင်းခန့်ကျော်က သရုပ်ဆောင်နေဒွေးကို ပိုက်ဆံသိန်း(၂၀)အကြွေးမပေးပဲ နေတယ်ဆိုပြီး လူမှုကွန်ယက်မှာ ပျံ့နှံ့ နေပါတယ် …။ နေဒွေးကိုယ်တိုင်ကလည်း ကိုယ်တွေလည်း အခုတလောလှူဖြစ်နေတာဆိုတော့ ရဖို့ရှိနေတဲ့ အကြွေးသိန်း(၂၀) လည်း လှူလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ ကိုယ့်အကြွေးတောင် တောင်းပန်မှ ပြန်ပေးမယ်ဆိုတော့ ဒါပေမယ့် အကြွေးပြန် မပေးလည်းနေပါဗျာ …။ အလှူတွေလုပ်ပြီး ခက်ခဲနေတဲ့ ဇာတ်ပို့ဇာတ်ရံတွေကို တတ်နိုင်သလောက် အလုပ်ပေးနေတဲ့သူတွေကိုတော့ သွားပြီးမစော်ကားပါနဲ့ဗျာ ဆိုပြီး ဆိုပြီး သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာမှာ ရေးသားခဲ့တာ ပဲဖြစ်ပါတယ် …။ အခု မင်းခန့်ကျော်က အဲဒီကိစ္စတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အခုလိုပြန်လည်ချေပ ခဲ့ပါတယ် …။ ” ကျွန်တော်ကို ချစ်တဲ့သူတွေက ပို့ပေးကြတယ် တိုက်ခိုက်ကြလို့သေသွားမယ်ဆိုရင်တောင် နောက်ဆုံးစက္ကန့်ထိအမှန်တရားကိုပြောနေမှာ သတ္တိရှိလို့မှန်ကန်ရင်လာခဲ့ကြမ်းကျိမ်ပီးပြောရဲတယ် သူများလိုမရှိရှိတာကိုမကောင်းကြောင်းရှာပီးတိုက်ခိုက်တာမဟုတ်ဘူး … Read more
မိန်းကလေးဘက်က စတင်တဲ့ Relationship တစ်ခုရဲ့ ကောင်းကျိုးများ…
မိန်းကလေးဘက်က စတင်တဲ့ Relationship တစ်ခုရဲ့ ကောင်းကျိုးများ… Relationship တစ်ခု စတင်ဖို့ဆိုတာ များသော အားဖြင့် ယောက်ျားလေးဖြစ်သူက စတင်ဖွင့်ပြောမှ ဇာတ်လမ်း တစ်ခု အစပြုတတ်ပါတယ် …။ ယောက်ျားလေး ဘက်က စတင်ဖွင့်ပြောမှ ချစ်သူဖြစ်နိုင်တယ် ဆိုတဲ့ အလေ့အထကြီးက ဘယ်က ဘယ်လို စတင်ခဲ့မှန်း မသိပေမယ့် ယောက်ျား မိန်းမ ရင်ဘောင်တန်းနေတဲ့ ဒီခေတ်ကြီးထဲမှာ မိန်းကလေးတစ်ယောက် အနေနဲ့လည်း ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ ယောက်ျားလေး တစ်ယောက်ကို လွတ်လပ်စွာ ဖွင့်ပြောခွင့် ရှိပါတယ် …။(သူများရည်းစား စနိုက်တာက လွဲပြီးပေါ့နော်) မိန်းကလေး တစ်ယောက်က စတင်တဲ့ Relationship တွေဟာ ဘာကြောင့် ပိုမိုခိုင်မြဲသလဲ၊ ဘာကောင်းကျိုးတွေရှိလဲ ဆိုတာ Brightside သတင်းဌာနရဲ့ ဖော်ပြချက် တစ်ချို့ကို အခြေခံပြီး … Read more